Maninona i Tiorkia no tsy mitsabaka ao Siria ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2020 19:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Français
Hetsik'ireo mpomba ny Kiorda tao Parisy, nalefan'i Jiel beaumadier – CC-BY 3.0
Ity no fanontaniana eny anivon'ny sehatra iraisampirenena amin'izao fotoana izao : ho lasa eo an-tànan'ny Fanjakana Islamika ve ilay tanàna siriàna ao Kobané ? Ao amin'ny faritry ny sisitany iraisany amin'i Tiorkia, efa nisafidy sahady ny fametrahana fepetra ahafahan'ny tafika mirotsaka an-tsehatra i Ankara. Kanefa tsy mbola niditra an-tsehatra foana hamonjy an'i Kobané ny tafika tiorka. Nahoana ?
Fihenjanana eo amin'ireo Tiorka sy Kiorda
Any avaratra-atsinanan'i Siria no misy an'i Kobané, faritra iray izay ny Kiorda no betsaka amin'ny mponina ary nilaza ny fizakantenany manoloana ny fitondràan siriàna tamin'ny Novambra 2013. Ny Kiorda no manome ny 30 hatramin'ny 40 tapitrisa amin'ireo olona monina ao Tiorkia, Iràka, Siria ary Iràna. Vahoaka tsy manana firenena izy ireo. Nefa, tato anatin'ny fotoana vitsivitsy izao, resahana matetika ny fananganana Kiordistàna iray mahaleotena tanteraka.
Hetsika iray mitampiadiana no nitsimohan'io tsaikanà firenena iray io, ny Antokon'ny Mpiasa ao Kiordistàna PKK. Ny tafika mitampiadiana ao anatin'ny PKK, ireo rantsana mpiaro ny vahoaka kiorda (YPG), no miaro an'i Kobané. Tamin'ny 1978 no natsangana tao Tiorkia ny PKK ary nanombka tamin'izany no efa nitarika hetsika fitakiana fahaleovantena ifanandrinana amin'ny tafika tiorka, ady efa namoizana aina maherin'ny 40.000 tao anatin'ny telopolo taona.
Izany no antony tsy itsabahan'ny tafika tiorka ao Kobané. Atahoran'i Ankara ny hahita Fanjakana kiorda mahaleotena, tarihan'ny PKK, hiforona any amin'ireo sisintanin'i Tiorkia. Ho an'ny filoha tiorka, Recep Tayyip Erdogan, sy ny governemantany « zavatra iray ihany ny Fanjakana Islamika sy ny PKK ». Ireo Kiorda manome tsy latsaky ny 20 % amin'ny vahoaka ao Tiorkia dia sahirana tokoa miditra ao anatin'ilay fitondràna tsy refesimandidy tiorka izay ny tafika no tena mibahan-toerana ao.
Mahay atsy sady mahay aroa, mampididoza
Ao amin'ny sisintany iraisany amin'i Siria, tsy mihetsika ireo fiara mifono vy sy ireo Tiorka mpiady, raha ny Antenimiera tiorka kosa nandany, tamin'ny 2 Oktôbra lasa teo, ny hametraka fepetra manome alàlana ny fitsabahan'ny tafika any Iràka sy Siria ka tanjona amin'izany ny hiadiana amin'ny Fanjakàna Islamika. Na izany aza anefa, hatramin'ny niantombohan'ireo fifandonana, efa nandray Kiorda mpialokaloka niisa 200.000 avy any amin'ny faritr'i Kobané sahady i Tiorkia. Ankoatra izay, nafindra ho any Tiorkia hotsaboina ireo kiorda mpiady naratra nandritra ireo fifandonana tao Kobané.
Hoy ny mpialokaloka iray:
An-jatony ireo fianakaviana natoby eto. Voatery matory amin'ny tany izahay ary tsy mahazo afa-tsy sakafo indray mandeha isanandro avy amin'ny ONG, toy ny Volantsinana Mena tiorka (Croissant-Rouge). Nomen'i Ankara alàlana hiampita ny sisintany ireo izay maniry hanao izany, saingy laviny tanteraka hatrany kosa ny hamela ny fiampitan'ireo andiam-biby fiompy, ireo fiara sy fitaovana vaventy hafa fampiasa amin'ny fambolena
Nangatahan'ny governemanta tiorka ihany koa ny famoronana faritra iray mampisaraka an'i Siria sy Tiorkia mba handraisana ireo nafindra toerana. Hevitra iray nahazo ny fanohanan'ny filoha frantsay, François Hollande. Manampy an'io fangatahana io ihany koa ny hevitra hananganana faritra habakabaka tsy azo isidinana ao avaratr'i Siria mba hiarovana ireo faritra eo ambany fitantanan'ny mpanohitra ny fitondràna siriàna.
Hitan-dry zareo (ireo filoha tiorka sy frantsay) ny tsy fitoviam-pijery ananany momba ny filàna manampy bebe kokoa ny mpanohitra siriàna tony fihetsika amin'ny ady atao hanoherana ny Daech sy ny fitondràn'i Bachar el-Assad. Nanitrikitrika ny filohan'ny Repoblika momba ny filàna misoroka ny fandripahana vahoaka any avaratr'i Siria. Nitondrany fanohanana ilay hevitra naroson'ny filoha tiorka, Erdoğan, hamorona faritra manasaraka an'i Siria sy Tiorkia mba handraisana sy hiarovana ireo olona nafindra toerana
Hoy ny ao Elysée.
Tsy maintsy miala haingana amin'io sady mahay atsy no mahay aroa io ny governemanta tiorka. Ny fandàvana tsy hanampy ireo mponina ao amin'ny faritr'i Kobané dia niteraka fihetsiketsehana fombàna ny kiorda tao Tiorkia, ary nanery an'i Ankara hametraka tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina tany atsimon'ny firenena. Raha izao làlana izao no tohizany, i Tiorkia no mety ho tondroina ho tomponandraikitra amin'izay mety ho fidarabohan'i Kobané.